हिउँले ढाकिएको फूलचोकी, हेर्नुहोस् १९ तस्वीर
शंखधर साख्वाजस्तै दानी बने अमिताभ, तिरिदिए किसानहरुको ऋण
गे-सेक्स उपन्यासकी लेखिकालाई १० वर्ष जेल, सामाजिक सञ्जालमा विरोध
चर्चित कमिक पुस्तकका लेखक लीको निधन
मिस नेपालका संस्थापक भन्छन्- सौन्दर्य प्रतियोगिताको दुरुपयोग भइरहेको छ
फिल्म समीक्षाः मैदानबाहिर बहकिएको ‘क्याप्टेन’
कमेडी क्लब सञ्चालन गर्दै जितु नेपाल
मिस नेपाल २०१९ को खोजी सुरुSandesh
आगामी बर्षका लागि मिस नेपालको खोजी सुरु भएको छ । आयोजक ‘द हिडन ट्रेजर’ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिस नेपाल–२०१९ को लागि आवेदन खुला भएको जानकारी दिएको हो । इच्छुक नेपाली युवतीले आवेदन दिन सक्ने उसले बताएको छ । यद्यपि तोकिएको मापदण्ड पुरा गर्नुपर्नेछ । आवेदक अविवाहित हुनुका साथै उमेर २० देखि २५ बर्ष र उचाई ५ फिट ४ इन्च अग्ला हुनुपर्नेछ ।
ओस्कार अवार्डमा ‘ग्रीन बुक’ सर्वोत्कृष्ट घोषितRoshan
यस वर्षको ओस्कार अवार्डमा ‘ग्रीन बुक’ सर्वोत्कृष्ट चलचित्र घोषित भएको छ । अमेरिकाको लस एन्जेलसमा आइतबार राति आयोजित ९१ औं ओस्कार अवार्ड समारोहमा यूनिभर्सल पिक्चर्सद्वारा निर्मित यस चलचित्रले बाजी मारेको हो । ग्रीन बुकले सर्वोत्कृष्ट चलचित्रसहित तीन वटा ओस्कार जित्यो ।
'लुट्न सके लुट्...' गीत पशुपति शर्माले हटाए तर युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्तीPrajwal
‘लुट्न सके लुट’ फेरि यूट्यूबमा राख्न लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको आग्रहRoshan
राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले हाल विवादित बनिरहेको गीत ‘लुट्न सके लुट..’ लाई फेरि जस्ताको तस्तै यूट्यूबमा राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिष्ठानको आइतबार बसेको बैठकमा सो गीतका विषयमा लामो छलफल भएको थियो । प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रहेका गायक पशुपति शर्मा पनि वैठकमा उपस्थित थिए ।
सत्तापक्षीय आक्रोशपछि पशुपति शर्माले युट्युबबाट हटाए ‘लुट्न सके लुट’Sandesh
सरकार, नेता र कर्मचारीहरूलाई ब्यंग्य गरेर गायक पशुपति शर्माले गाएको ‘लुट्न सके लुट कान्छा’ बोलको लोकप्रिय लोकगीत सरकारपक्षीय कार्यकर्ताको तिब्र आक्रोश र दबाबपछि युट्युबबाट हटाइएको छ । गीत भाइरल भएपछि नेकपासम्बद्द कार्यकर्ताहरूले सामाजिक संजालमा पशुपति शर्मा बहिस्कार अभियान चलाएका थिए भने युवासंघ नेपाल नामको फेसबुक पेजबाट उनीबिरुद्ध धम्की दिएर बक्तब्य निकालिएको थियो ।
पत्रकार वाग्लेको तेस्रो पुस्तक ‘कोरियाना’ बजारमाAnkit
पत्रकार नारायण वाग्लेको नयाँ पुस्तक ‘कोरियाना कफीगफ’ बजारमा आएको छ । यसअघि दुईवटा उपन्यास सार्वजनिक गरेका वाग्लेले तेस्रो कृतिका रुपमा गैर आख्यान कृति ल्याएका हुन् । उनको कृति पब्लिकेशन नेपालयले बजारमा ल्याएको हो । यो कृति पत्रकार वाग्लेले समाचार कक्षभित्रै सुरु गरेको चर्चित स्तम्भ ‘कफीगफ’मा आधारित छ ।
किन विक्री भएनन् जर्मन तानाशाह 'हिट्लरका पेन्टिङ्ग'Neelam
नाजी नेता एडोल्फ हिट्लरले बनाएको भनिएका पाँचवटा पेन्टिङ्ग जर्मनीमा गरिएको एउटा लिलाम बढाबढमा विक्री हुन सकेनन्। लिलाम बढाबढ गर्ने केन्द्र वाइडलरले पेन्टिङ्गहरूको लिलाम बढाबढको शुरूवाती मूल्य ५१ हजार अमेरिकी डलर तोकेको थियो। जर्मनीको नुरमबर्गमा लिलाम बढाबढको आयोजना गरिएको थियो, जुन शहर कुनैबेला हिटलरका बृहत् र्‍यालीहरूका लागि कुख्यात थियो।
‘गोपी’, ‘रणवीर’ र ‘सय कडा दस’Neelam
फरक–फरक विषयबस्तुका तीन फिल्म आज शुक्रबारबाट प्रदर्शन हुँदैछन्। दीपेन्द्र लामाको ‘गोपी’, गोविन्दसिंह भण्डारीको ‘रणवीर’ र रामशरण पाठकको ‘सय कडा दस’ प्रदर्शन हुँदैछन्। दीपेन्द्रको फिल्म ‘गोपी’ले एक शिक्षित युवाले अमेरिका जाने मोहलाई त्यागेर गाउँमा नै गाईपालन गरेपछि उसको जीवनमा आइपर्ने उतारचढावलाई प्रस्तुत गरेको छ।
हिउँले ढाकिएको फूलचोकी, हेर्नुहोस् १९ तस्वीरreeshav
मंगलबार साँझदेखि मौसम बदली हुँदा फूलचोकीसहित काठमाडौं वरपरका डाँडाहरुमा हिमपात भयो । रातिदेखि हिउँ परेपछि काठमाडौंका वासिन्दा विहानै हिउँ खेल्न फूलचोकी पुगेका थिए । विहानदेखि दिनभरजसो फूलचोकीमा हिउँ खेल्नेहरुको भीड लाग्यो । हिउँ खेल्न जानेहरुका कारण फूलचोकी जाने सडकमा लामो जामसमेत भयो ।
सम्पदा बस्ती बुङमती अझै उठ्न सकेनreeshav
‘एक वर्षभित्र तपाईँहरूका घर ठडिन्छन्। लडेका ऐतिहासिक सम्पदाहरू उठ्छन्। सबैलाई सुरक्षित वास दिलाउन सरकार लागिपर्छ,’ तीन वर्षअघि ललितपुरको ऐतिहासिक वस्ती खोकना पुगेर तत्कालीन तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घरवास गुमाएकालाई यसरी सान्त्वना दिएका थिए।२०७२ माघ २ गते भूकम्प दिवसकै अवसर पारेर ओलीले रिबन काटेर यहीँबाटै ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियान’ सुरुवात गरेका थिए।
हातमा फिल्म छैन, तर घटेको छैन राजेश हमालको व्यस्तताRoshan
नायक राजेश हमालको क्रेज पर्दामा कमजोर बनेतापनि पर्दा बाहिर जस्ताको तस्तै छ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा लामो समयदेखि राज गरेका हमालले बनाएको उचाई नै यति लोभलाग्दो छ कि, चलचित्र हेर्ने र नहेर्ने दर्शकको मुखमा उनको नै नाम झुन्डिएको छ । चलचित्र ‘शकुन्तला’मा काम गरेपछि चलचित्रमा काम गर्नबाट विश्राम लिएका नायक हमालको हातमा अहिले कुनै पनि प्रोजेक्ट छैन ।
छुट्टी वा फुर्सदको दिन कसरी बिताउने ? कति धाउनु चिडियाघर, फनपार्क अनि सिनेमा हल ? धेरैलाई यस्तै लाग्छ । यदि तपाईं पनि एक दिने छुट्टीलाई कसरी फलदायी बनाउने भन्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ भने चम्पादेवी एउटा विकल्प हुन सक्छ ।
श्रृंखला खतिवडा बनिन् नेपाल- फ्रान्स दौत्य सम्बन्ध वर्षगाँठको सद्भावना दूतChitwan
नेपाल र फ्रान्सको ७० औं दौत्य सम्बन्ध दिवस मनाउने क्रममा मिस नेपाल श्रृंखला खतिवडा सद्भावना दूत तोकिएकी छन् । दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकले श्रृंखलालाई सद्भावना दूत नियुक्त गरेको हो । सचिवस्तरीय वार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी र फ्रान्सका विदेश सचिव मोरिस गर्दो मोन्तेनियोले संयुक्त रुपमा उनलाई सद्भावना दूत नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरे ।
प्रथम नायिकाको स्मरण : हामी त आँखाबाटै ग्ल्यामर दिन्थ्यौंMakalu
नेपालमा पनि चलचित्र बन्ला र आफू नायिका बनौला भनेर भुवन चन्दले पहिले सोचेकी नै थिइनन् । २०१० सालबाट रंगमञ्चमा रमाउन थालेकी उनी त्यसैमा सन्तुष्ट थिइन् । विदेशी चलचित्रहरु हेर्दा उनलाई पनि नायिका बन्ने मोह नजाग्ने होइन । तर, त्यो पूरा होला भन्ने एकरति आश उनीमा थिएन । जब भुवनले नेपालमा पहिलोचोटि आमा नामक चलचित्र बन्दैछ भन्ने सुनिन्, खुसीको सिमा नै रहेन ।
ल्यान्डस्केपमा सुन्दर खोकना
मिस नेपाल २०१९ को खोजी सुरु